Nisy vehivavy 2 tsy fantatra hoe avy aiza, izay nilaza avy any Anosibe an’Ala no nampiahiahy tao amin’ny kaominina Andriakely. Natao fitiliana TDR dia miiba ny valiny. Nojerena ny teo amin’ny sakana ara-pahasalamana na ny “barrage sanitaitre” tsy tao ny anarany. Notazonina ary tsy maintsy natao fitiliana PCR, ka andrasana ny valiny. Lehilahy 25 taona, zanaky ny pasitera avy amin’ny fiangonana FPVM kosa no efa voamarina ofisialy fa voan’ny Covid-19 ao amin’ny Kaominina Ambohidanerana. Nanao fivahiniainana tany Toamasina, ary tsy fantatra izay fomba nahatongavany tany Ambohidanerana, hoy ny fanazavanan’io. Ny zandriny dia mianatra amin’ny EPP, ka nakatona ny sekoly ankoatra ny fiangonana. Tsy maintsy hisy mazava ho azy ny fitiliana. Mpivady avy any Toamasina ihany koa no arahi-maso nampidirina tao amin’ny Hopitaly Carma ao Ambohitromby. Tsy nandalo tao amin’ny sakana ara-pahasalamana ireo olona. Mandeha kamio, ary miala mody mandeha tongotra rehefa handalo sakana, raha ny fanazavana.